टाइटन सिजन3को अन्त्यमा आक्रमण सुन्दर छ - क्र्याडल दृश्य
टाइटन अन्त्यमा आक्रमण
by Dima 1st नोभेम्बर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड टाइटन सिजन3मा आक्रमण मा समाप्त सुन्दर छ
मैले यस्तो कहिल्यै सुनेको छैन। टाइटन सिजन3समाप्त भएको आक्रमण सुनेपछि तपाईले भन्न सक्ने कुराहरू यी हुन्। यो केवल अचम्मको थियो, र पक्कै पनि, मैले देखेको सबै भन्दा राम्रो ओपनिंग हो अरू सबैको तुलनामा।
सिंहावलोकन - टाइटन अन्त्यमा आक्रमण
तलको उद्घाटन हो जुन तपाईंले पहिले सुरुको सुरुवात सुन्नुभएको छैन भने मैले के कुरा गरिरहेको छु भन्ने राम्रोसँग बुझ्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघिल्लो लेखहरूमा उल्लेख गरेझैं केही एनिमे ओपनिङ र विशेष ध्वनिमा साउन्डट्र्याकहरू कहिलेकाहीं यति एकीकृत हुन्छन् कि तिनीहरू साउन्डट्र्याकको सट्टा गान जस्तै महसुस गर्छन्। यो मैले स्पष्ट रूपमा फेला पारेको छु टाइटन मा आक्रमण, दुबै 1st, 2nd 3rd (अहिलेसम्म) खोल्ने क्रममा।
मूल गीत3मा बाहिर आएको Attack on Titan Anime को 2018d रिलिजको अंश थियो। गीतले वास्तवमै तपाईंको ध्यान खिच्छ र आफूभित्र हुने धेरै न्यानो र खुसीको भावनालाई स्थापित गर्छ।
उपकरण र परिणाम - टाइटन अन्त्यमा आक्रमण
हृदयस्पर्शी गायन र मधुर पियानोले पक्कै पनि गीतमा ठूलो भूमिका खेलेको छ र यसले मेरो लागि यो साँच्चै अविस्मरणीय बनायो। यसले मलाई श्रृंखलाको बारेमा अर्को बिन्दुमा पनि ल्याउँछ र टाइटन मा आक्रमण सामन्यतया।
अन्य विषयवस्तुहरू उस्तै राम्रा छन् र यसले वास्तवमा के आउँदैछ भनेर बोल्छ। टाइटन मा आक्रमण एउटा शृङ्खला हो जसलाई म पछि कभर गर्नेछु र यो यस्तै टुक्राहरू हुन् जसले मेरो एनिमे हेर्ने यात्रालाई धेरै रमाइलो र रमाइलो बनाएको छ। गीतहरू गानजस्तै सुनिने तथ्यले तपाईंलाई उठेर ठूलो स्वरमा गीतहरू सुनाउन मन लाग्छ, रमाईलो रूपमा तपाईंको हृदयको सामग्रीसँगै गाउन।
यसलाई एक-त्यति-प्रेरणादायी अन्त्यसँग तुलना गर्दै
मैले यो गीतहरूको बारेमा साँच्चै रमाइलो गरें किनभने यसले तपाईंलाई उत्थान दिन्छ र यो निश्चित रूपमा मैले देखेको अन्य एनिमे अन्त्यहरू र ओपनिङहरू भन्दा बढी यादगार छ। मेरो मतलब, के तपाईलाई ब्ल्याक लगुन सिजन १ र २ को अन्त्य र विषयवस्तु याद छ? एकचोटी हेर्नु:
ब्ल्याक लगुन सिजन १ र २ अन्त्य हुने विषयवस्तु
अब, सायद यसलाई त्योसँग तुलना गर्नु उचित होइन, किनभने तिनीहरू समान स्तरमा छैनन्। कालो लगून र टाइटन मा आक्रमण पूर्ण रूपमा फरक लेनहरूमा छन्। जे होस्, एउटा कुरा पक्कै पनि स्पष्ट छ, एउटाले मलाई पूर्णतया शक्तिशाली र स्वस्थ भावनाको अनुभूति गराउँदछ, र अर्कोले मलाई मृत र खाली, हराएको महसुस गराउँछ, अत्यधिक डराउने डरको भावनाको साथ।
के अन्त्य र विषयवस्तुहरू महत्त्वपूर्ण छन्?
मलाई लाग्छ कि अन्त्यहरू महत्त्वपूर्ण छन् किनभने तिनीहरूले अन्तिम भावना स्थापना गर्छन् जुन तपाईंले आफ्ना श्रोताहरूमा पुग्न प्रयास गरिरहनुभएको छ।
यसको मतलब यो एक चारैतिर विषयवस्तु प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ जुन सामान्यतया कथाको विषयवस्तुलाई जोड्छ। यो स्पष्ट रूपमा गाह्रो हुन सक्छ।
तर, टाइटन सिजनमा आक्रमण मेरो उद्घाटनमा3समापन सही रूपमा गरिएको थियो। यसले तपाईंलाई कहिलेकाहीँ खुशी ल्याउँछ जहाँ एपिसोडको डरलाग्दो अन्त्य भएको छ।
टाइटन सम्बन्धित सामग्रीमा समान आक्रमण
को प्रशंसक टाइटन मा आक्रमण? यदि तपाइँ यस बारे तल केहि समान लेखहरू जाँच गर्न विचार गर्नुहोस् टाइटन मा आक्रमण। हामी बारेमा नयाँ लेख प्रकाशित टाइटन मा आक्रमण सबै समय, त्यसैले मितिमा रहनको लागि सदस्यता लिनुहोस्।
यदि तपाइँ हाम्रो ब्लगबाट सबै नवीनतमको साथ अद्यावधिक रहन चाहनुहुन्छ भने कृपया तलको हाम्रो इमेल सूचीमा साइन अप गर्ने विचार गर्नुहोस्।
अघिल्लो प्रविष्टि कागुया समा सिजन ३ रिलिज मिति + नयाँ पात्रहरू
अर्को प्रविष्टि The Way of the Househusband Season3रिलिज मिति